Eyona mimandla ishushu ye-Erogenous esekwe kuphawu lwakho lwe-Zodiac - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
Ukuvumisa ngeenkwenkwezi kuthetha okuninzi ngawe ngokwesondo, kubandakanywa iindawo zakho zokuzonwabisa kunye nokuba zeziphi iindawo zomzimba wakho ezizezona zinomdla kunye nokuchukumisa. Zeziphi iindawo erogenous zophawu lwakho lwezodiac? Ukwazi ukukholisa iqabane lakho ebhedini kuphantsi kokwazi apho kufuneka ugxininise ingqalelo yakho kunye nenqanaba lokuqina. Wonke umntu wahlukile kwaye ufuna into ekhethekileyo ukuba ivulwe, fumana ukuba yintoni efunekayo wena kunye nesithandwa sakho.
Uphawu ngalunye lwezodiac lufuna into eyahlukileyo ukuze lube yi-orgasm. Isondo esikhulu malunga nokuqonda umzimba kunye nokwazi ukuba yintoni eqhuba umntu ngamnye endle kwigumbi lokulala. Ukuncamisa inkanuko kunokwenza ukuba abanye bethu bahambe, ngelixa iimasaji ezivuselelayo zibonakala zisebenza ngcono kwabanye. Fumanisa zeziphi iimpawu ze-zodiac ezinokuhambelana kakuhle ngokwesondo . Ngawaphi amalungu omzimba afuna ukuvuselelwa phambi kweseshoni yokwabelana ngesondo yasendle?
Uphawu lwakho lwezodiac lutyhiliwe iindawo ezingaqhelekanga
Kuba uphawu ngalunye lulawula inxalenye yomzimba wethu, kuya kufuneka ufumane ezona ndawo zibuthathaka. Ilungile loo nto, ezo zandisa ulonwabo lokuchukumisa kunye neemvakalelo zeemvakalelo zakho. Enyanisweni, iindawo ezithile zemizimba yethu zinobuthathaka kwaye zinomdla kunezinye. Ngoku, ukuze ugweme naziphi na iimpazamo kwigumbi lokulala, sityhila eyona ishushu ulonwabo indawo s ezifuna ukuphononongwa ngokukhawuleza!
-Fumana umgangatho we yeyiphi imiqondiso ye-zodiac eyona nto ingcono ebhedini ! -
Cofa kwiimpawu zehoroscope apha ngezantsi.
Fumana ikamva lakho othandweni kunye nobudlelwane ngoncedo lwePsychic!
Intloko kunye nentloko yentloko iyavuyisa uAries
I Aries uphawu iindawo ze-erogenous zibotshelelwe kwi isikhumba, intloko, nobuso. Ukutshisa izinto ngobumnene, qalisa ngokunika i-Aries umyalezo we-scalp. I-massage yentloko inamandla okuphumla abantu bahlala bengawahoyi, ke sebenzisa isandla sakho ngobunono ngeenwele ze-Aries kwaye wenze iintshukumo ezijikelezayo. Oku kunokubonakala kumangalisa kuwe, kodwa le yeyona ndlela ibalaseleyo yokuvusa iimvakalelo ze-Aries, ke qhubeka kwaye ufumane intshukumo elungileyo kunye nendawo yomlingo.
Taurus ' iindawo zokuzonwabisa zinxulunyaniswa ne intamo. Ukwenza iTaurus inyibilike, ncamisa i-nape yentamo yabo, umphambili wentamo yabo, kunye namagxa abo ngobunono, kulandelwa kukuphulula okuthambileyo. Ukuba ufuna ukuphatha iqabane lakho nangakumbi, lisebeze kamnandi akukho nto isezindlebeni zalo... oku kuyakwenza iTaurus iphambane!
Gxininisa kwisifuba kunye namabele kwiGemini
Gemini iindawo zobugqi yile isifuba, isisu, namabele. Ezi ndawo zinovelwano kakhulu kubahlobo bethu beGemini: ukuncamisa, ukuphululwa, okanye nokubamba kancinci kuya kuvusa uthando lukaGemini. Ungalibali ukuba uGemini ukwayingqondi, ke khebeza amagama akhohlakeleyo ezindlebeni zabo ... iGemini yakho iya kuyithanda.
Imilebe iya kuqhuba uMhlaza endle
Umhlaza indawo erogenous yi umlomo. Thatha iCancer uye kwi-7th izulu, qala ngokubaphatha kakuhle emlonyeni. Ungalibazisi ukudlala ngomlomo wakho ngokukhotha imilebe yakho. Jonga uMhlaza wakho ngamandla kwaye ungazibambezeli...
Isisu siya kwenza iqhinga kuLeo
Leo indawo ye isisu , ngoko lo mqondiso uthanda i-caress kunye nokumanga kule ndawo. Ukuvuselela umnqweno ku-Leo, bamba isisu sabo kancinci kwaye ulandele ngokumanga. Ungaze ulibale ukuba uLeo kufuneka anqwenelwe kwaye anconywe kakhulu, ke akukho nto iya kumvuyisa uLeo ngaphezu kokukubona ubanqwenela.
Isisu siya kumisa iVirgo
Virgo uphawu ludityaniswe ne amazantsi esisu, ngoko unokuqala ngokuphuza indawo yenkaba, uqhubele phambili ngobunono ukuya kumazantsi esisu emva koko. Ukwenza ngokwenene i-Virgo iphambene, ubumnene kunye novelwano ngundoqo!
Iponti Uphawu lunenkanuko enkulu ukuqala, ke iiLibras zidinga uthando kunye nokunxibelelana ngokwasemzimbeni. eLibra umzimba wonke unerogenous, ngoko ukubamba kunye nokuphululwa kuya kwenza i-Libra keel ibe ngaphezulu ngephanyazo.
Impundu iya kuyivuselela iScorpio
I-Scorpio indawo yolonwabo ibotshelelwe kuyo iimpundu. Ukujonga okulula kwi-butt enhle kunokwanela ekuvuseni iScorpio. Ukuba ufuna ukuhenda indoda yeScorpio, cinga ngokwenza i-strip-tease kwaye unxibe i-lingerie ehehayo, ngokukhethekileyo ngemibala eqaqambileyo. Abafazi beScorpio bathanda xa umntu echukumisa kwaye ephulula iibhum zabo.
I Sagittarius indawo erogenous yophawu idityaniswe ne imilenze neenyawo. I-massage okanye i-caress ethile iya kuvusa ngokukhawuleza iimvakalelo ze-Sagittarius. Ngendoda yeSagittarius, ukubona imilenze ethandekayo emibini kwizithende ezithambileyo kuya kubamba ingqalelo yakhe…
Umva uya kuvuselela iCapricorn
Capricorn uphawu lwemimandla erogenous zidityanisiwe umva. Ukuvusa iimvakalelo zeCapricorn, akukho nto ingcono kunokumasa inkanuko! Nciphisa izibane, khetha i-oyile okanye isiqholo esiswiti, kwaye udlale umculo ohamba nomoya ngasemva. Obu iya kuba bubusuku obushushu ngokwenene!
Iindlebe ziya kuvula i-Aquarius
Nge Aquarius , indawo yendlebe ibuthathaka kakhulu, nokuba oko kunokubonakala kungaqhelekanga kwabanye. Ewe, indlebe kunye ne-lobe ivuselela ngakumbi ukucinga kwabahlobo bethu base-Aquarius. Ilizwi elinye lengcebiso: abanye bayayithanda le nto, abanye bayayithiya, ngoko iphindwe kabini okanye iyayeka. Musa ukunyanzelisa oku ukuba i-Aquarius yakho ikutyhalela kude!
Izinqe ziya kukhulula iiPisces phezulu
Nge IiPisces , amacala kunye nesinqe ziindawo ezibuthathaka kakhulu, ke banike i-massage, bahlale kwezi ndawo ukuze bavuse iimvakalelo zePisces. Unganqikazi ukuthatha umfazi wePisces ngesinqe kwaye ucofe ngobumnene ezinqeni zakhe.
Ziphi iindawo zakho ze-rogenous?
Lauviah, Ingelosi enguMgcini weZityhilelo namaphupha
I-Horoscope yeNja ngo-2021: Owona nyaka uzolileyo okwangoku